Isikhokelo sePaki kunye noLonwabo Isikhathi 5 isiqendu
'Iipaka kunye noLonwabo' Ixesha le-5 Isiqendu
Isikhokelo seengqungquthela kwixesha le-2012-13 leePaki kunye noLonwabo kwiNBC
Ixesha lesine leePaki kunye noLonwabo lenza iLeslie igxininise kwaye iphumelele kwisihlalo kwibhunga le sixeko, uTom uqalise aze atyathele inkampani yakhe, kunye noBen baqeshwe emsebenzini wezopolitiko eWashington, DC Ngesihlanu, uLeslie uthatha umsebenzi omtsha aze atshade noBen, uTom uvula inkampani entsha, kunye no-Andy, uEpreli, kunye no-Chris bonke bathatha imingeni emitsha. Funda kwi- Parks and Recreation Recreation season.
Isihloko: "Nks. U Knope Uya eWashington "
I-Airdate yasekuqaleni: Septemba 20, 2012
U-Leslie no-Andy baya eWashington, DC, ukuba batyelele uBen no-Aprili, abasebenza apho kwiCampressional campaign. ULeslie uzizwa engonelanelekanga xa ebona ubomi bukaBen bufana nobomi bonke abafazi abadibana nabo (kuquka nabasenjenja uBarbara Boxer no-Olympia Snowe). NjengoLeslie, uRon nguye ophethe i-Barbecue yonyaka yeSebe lePaka. Emva kokuba uRon adle i-barbecue yonke into emnandi uLeslie ayetyenziselwa ukuyiletha kuyo, uChris uyamxelela ukuba kufuneka abonise ubuholi obuninzi. Nangona u-Ann noTom bephukile, bazenza ukuba kunye ukuze uTom anqobe ukubheja noDonna.
Isihloko: "I-Tax Soda"
I-Airdate yasekuqaleni: Septemba 27, 2012
ULeslie unxusa irhafu kwi-sodas ye-sugar and then has a crisis about whether he is voting for his own proposal since so many inhabitants against it.
Ekugqibeleni, uRon noAnn bobabini banceda bamnike ukuzithemba ukuvota ibhilikhwe yakhe, kwaye idlula. UChris noTom bamncedisa u-Andy ukuqeqesha isifundo somnyango wezemfundo samapolisa ngenxa yokuba sele engabonakali. EWashington, uBen unenkathazo yokufumana abafundi beekholeji kwiofisi (kunye no-Ephreli) ukuba bamhlonele.
Ekugqibeleni, uzibambelela aze athi u-Apreli kufuneka abeke umgudu wangempela emsebenzini wakhe.
Isihloko: "Yeyiphi iYilwayo eyaba ngumThetho"
I-Airdate yasekuqaleni: Oktobha 4, 2012
Ngo-Epreli noBen banquma ukuhamba ngendlela eya ePawnee ukuba bamangalise u-Andy no-Leslie, kodwa banamathela kwi-traffic eWashington. UChris usebenzisa i-311 umgca wee-non-emergency calls, kwaye uRon uzenzele ngokwakhe ukulungisa i-pothole echazwe ngumama ongatshatanga (uLucy Lawless). Umxakile ngemigudu yakhe, umbuza ngomhla. U-Leslie unomdla ngokuzama ukubeka iivoti ezaneleyo ukuba adlulisele ibhilikhi ecebise ngayo malunga nokwandisa iiyure zomhlaba. Ukuze enze njalo, unika i-ofisi yakhe kunye nokupaka kwakhe indawo yokubambisana naye, iBhunga likaJamm (uJon Glaser wokutshintshwa ).
Isihloko: "Imfundo yezesondo"
I-Airdate yasekuqaleni: Oktobha 18, 2012
Njengesijeziso sokuthumela imiyalezo ngexesha lokuqhuba, uTom kufuneka ahambe iveki ngaphandle kokusebenzisa izixhobo zombane. URon uthabatha uTom waya ekhayeni lakhe ukuze ancede uTom ukuba angene kwizkrini. ULeslie uqalise isicwangciso sokubonelela ngemfundo yesondo kubahlali abadala, abaye bafumana izifo ezithathelwana ngesondo. Ugijimelana nomthetho wezemfundo kuphela wokuzilahla, kodwa uyazilungisa ukuze enze okulungileyo, kwaye uthembisa ukulwa nokutshintsha imithetho.
UBen no-Apreli bafumanisa ukuba umphathi wabo we-congressman uyabangela ukuphazamiseka.
I-Airdate yasekuqaleni: Oktobha 25, 2012
Emva kwesikhankaso sakhe saseWashington sigxuma kusasa, uBen unikezwa ithuba lokuqhuba iprojekthi yeburhulumente waseFlorida kwaye uqothulwe malunga nokuba uthathe umsebenzi okanye abuyele kwiPawnee. Ngaphambi kokuba enze isigqibo sakhe, ubuyela ku-Pawnee kwaye ucela u-Leslie, othi u-ewe. UJerry unesifo sengqondo esifanelekileyo kwiHalloween , kwaye uLeslie ulungiselela inzuzo ekuncediseni imali yokunyamekela unyango. URon unenkathazo yokusebenzisana nabantwana bakhe intombazana xa ebaphatha ngokunyanga okanye abaphatha ngayo, kodwa wenza isigqibo sokwenza ukwazi.
Isihloko: "Abazali bakaBen"
I-Airdate yasekuqaleni: Novemba 8, 2012
UBen noLeslie baphosa umcimbi wokubandakanyeka, kwaye uBen uyaxhalaba ngabazali bakhe abaqhawule umtshato, abathandanayo, behlala kwigumbi elinye.
U-Leslie uza kunye nesicwangciso sokuqinisekisa ukuba akalwi, kodwa uyahluleka, kwaye abazali bakaBen baqhelise ukuchitha inkundla. UBen noLeslie bahlala phantsi baze bafune ukuba bayeke ukulwa okungenani ixesha elide ukwenzela ukuba bobabini baya kumtshato kaBen noLeslie. UChris unesifo sengqondo ngenxa yokuba yedwa, no-Ann, uEpreli, no-Andy bazama ukumnceda. UTom ubeka ingcamango yakhe yoshishino, I-Rent-a-Swag, kuRon.
Isihloko: "Leslie noAprili"
I-Airdate yasekuqaleni: Novemba 15, 2012
U-Apreli unikeza u-Leslie ngesiphakamiso sokwakha ipaki entsha yenja kwiLote 48. U-Leslie uvakalelwa kukuba kufuneka abe nguye ophuhlisa uLote 48 ekubeni sele esebenza kuyo ixesha elide, kwaye uzama ukuxhathisa imizamo ka-Apreli. Bobabini bahlaselwa yiBhunga likaJamm, kwaye ngoko bavuma ukusebenzisana ukuze benze ipaki ye-dog ibe yinyaniso. UTom ukhuthaza uBen ukuba adibanise nebhishini lakhe elitsha, ebonisa uBen ubunjani amathuba amathuba emisebenzi apho. Uyanqanda umsebenzi wakhe omtsha wokuphendula ingxelo ukuze abone enye into ekhoyo. U-Chris unika uAndy umsebenzi njengomlondolozo weveki yeSixeko.
Isihloko: "I-Pawnee Commons"
I-Airdate yasekuqaleni: Novemba 29, 2012
ULeslie uphakamisa ucingo lwezicwangciso zepaki entsha, kwaye impendulo engcono kakhulu ivela kumakhi we- Eagleton. Akakwazi ukuvuma ukuba i-Eagletonian iya kuba nomdla ekuncedeni iPawnee, kodwa ijika ibe nexhala kunye ne talente kwaye iveza umzekelo wepaki ekhangayo. UTom unikeza abasebenzi abasebenzisana nabo ukuba bancede ukusekela isitolo seTheng-a-Swag. U-Andy unxungupha emsebenzini wakhe omtsha njengomkhuseli, kodwa yena no-Apreli banceda umntwana olahlekileyo, kwaye uyaqonda ukuba unokuba ngumhle emsebenzini wakhe.
Isihloko: "URon noDiane"
I-Airdate yasekuqaleni: Disemba 6, 2012
URon utyunjwe ngomvuzo wokhuni kwaye uzisa uDiane kumcimbi wokubonga. ULeslie uyavuya ukudibana noDiane, kodwa uDeane utshele uLeslie ukuba uyasongelwa nguLeslie noRon abasondeleyo. UTammy (uMegan Mullally) ubonakalise ubonakalisa ubusuku bukaRon, kodwa u-Leslie uyamkhupha, uRon uchitha ixesha kunye noDiane, ukubonakalisa ubuhlobo bakhe noLeslie akuyiyo ingozi. UAnn uvala uTom, uDonna, uApreli, no-Andy baphuma kwiJarimusi yeParadise (ephelele nomfazi wakhe omhle, edlalwa nguChristie Brinkley) de bafunde ukuthanda uJerry. UBen uyamangalisa indlela unyango lukaChris luye lunceda ngayo ukungaqiniseki kwakhe.
Isihloko: "Amalungu amabini"
I-Airdate yasekuqaleni: uJanuwari 17, 2013
Ebandleni likaBen, unquma ukuba ufuna ukudlala i-Settlers yaseCatan, ebetha bonke abantu. UChris ucela ukuba uTom, no-Andy, uRon, noJerry bafumane onke amaqela angama-bachelor awazange abe nawo. Nangona uLeslie eneeveki ezimbini eziseleyo ukuba angenise isicelo sakhe sokupaka ipaki, iBhunga likaJamm liphule umhlaba ngokubambisana kwakhe nomhlaba. ULeslie uzama ukumkhuphaza ngokutshala i-Wamapoke yaseNamerica kwizinto eziza kwenziwa kwisiza kwaye uyazisola. Xa izakhiwo zifunyenwe, u-Leslie uyavuma kumphathi wakwaMamapoke, kodwa ugcina imfihlo yakhe kwaye unceda uJamm ukuba ahloniphe i-deal.
Isihloko esithi: "Abasetyhini kwinqwelomba"
I-Airdate yasekuqaleni: uJanuwari 24, 2013
ULeslie wenza ikhomishana yokwandisa umsebenzi wesetyhini kurhulumente wesixeko, kwaye xa isebe lokuhlambalaza lihlambalaza, u-Leslie no-Apreli bachitha usuku njengabaqokeleli bamataka ukubonisa ukuba abafazi banokwenza umsebenzi.
Xa abasebenzi bezococeko bawaqhatha ngomsebenzi ongenakwenzeka, bawujika kwaye baphelise ukuba iSebe liqeshe abaqokeleli bamatye. URon uyagxinwa ezama ukufumana iintsana zikaDiane. UAndy noBen banceda uTom ukuba afunde ngebhakballball. UChris uzama ukujonga ubuhlobo bakhe obunzima kunye nentatheli uShauna Malwae-Tweep.
Isihloko: "Isinqumo sika-Ann"
I-Airdate yasekuqaleni: Februwari 7, 2013
UAn Ann unquma ukuba ufuna ukuba nosana nge-doner yesini, kunye noLeslie uzama ukumkholisa ukuba alinde uthando lokwenene kunoko. UAn ucelwa ukuba abuze u-DJ u-Douche u-Douche ukuba abele umntwana wakhe, kodwa u-Leslie uyamshukumisela ukuba aphucule aze enze isigqibo esinyamekileyo. UBen, uRon, noChris bafumana ukutyhelwa kokutya emva kokuvavanya umtya kaBen kunye noLeslie, kwaye uBen unquma ukuba iJJ's Diner ibe nomtshato. U-Apreli uzama ukulinganisa uLeslie njengoko eqhuba iintlanganiso zedolophu malunga nepaki entsha, iPawnee Commons.
Isihloko: "Ukuphendula ngokukhawuleza"
I-Airdate yasekuqaleni: Februwari 14, 2013
ULeslie udinga ukuphakamisa i-$ 50,000 ngaphezulu kweprojekthi yePawnee Commons kwaye iphela iveki yokwenza. Uceba i-gra fundraising, kodwa iBhunga likaJamm lizama ukuluphazamisa ngokucwangcisa ukulungelelaniswa kwexesha elijongene nxamnye nosuku lomcimbi. Ngelixa uLeslie ezama ukugqiba i-drill, uBen ulungelelanisa i-gala, kwaye iphetha ukuba yimpumelelo epheleleyo. ULeslie uyavuya ngoBen kangangokuba banquma ukutshata ngaloo busuku kwi-gala. U-Andy aces uvavanyo lwakhe lwamapolisa olubhaliweyo kodwa aluphumelelanga ukuhlolwa komntu.
Isihloko: "Leslie noBen"
I-Airdate yasekuqaleni: Februwari 21, 2013
U-Leslie noBen bahlambalaza ukuhlanganisa umtshato wabo ngomzuzu wokugqibela, ukuba kwenzeke ngokukhawuleza emva kwe-gala yokuxhasa imali. Ngandlela-thile yonke into iyahlangana, kodwa iBhunga likaJamm liye laphazamisa umcimbi ngaphambi kokuba uqale, kunye noRon ammbethe ebusweni. Nangona uRon kufuneka achithe iiyure ezimbalwa entolongweni kwaye izixhobo zegala zidibaniswe, umtshato uyaqhubeka, kunye nabahlobo bakaLeslie bahlanganisa umkhosi kwiofisi.
U-Leslie uhamba ngesidlo sonyaka apho abapolitiko beendawo kunye nabathengi bezentambulane, kwaye intatheli evela kwi- Pawnee Sun ibambe amahlaya akhe. ULeslie ufumanisa ukuba ilanga liye lahlawula i-imeyile yakhe, kwaye uyayichaza kwinkomfa yenkomfa. UAnn ucela uKrism ukuba abe nguyise womntwana wakhe, kwaye akazi ukuba uthetha ntoni. UBen uqala umsebenzi wakhe omtsha ngentloko yeSweetums Foundation kwaye kufuneka akhethe uthando lokuxhasa. Uqeshe u -Andy ukuba abe ngumncedisi wakhe omtsha emva kokuba u-Andy ubonise i-acumen emangalisayo kumsebenzi wokunceda.
I-Airdate yasekuqaleni: Matshi 14, 2013
Xa u-Leslie ezama ukunceda ivenkile yevidiyo yendawo ekhuselekileyo ngokuyifumanisa njengembonakaliso yembali, uRon uzama ukuphazamisa imizamo yakhe, kuba akavumelani nokunika inkxaso karhulumente. Uphumelela ekufumaneni ukutyunjwa, kodwa indawo iya kuba esitolo sevidiyo esidala ukuze kuguqulelwe inzuzo. UTom uqeshe udade kaJean-Ralphio udadewabo u-Mona Lisa (uJenny Slate) ukuba asebenze kwi-Rent-a-Swag, kwaye ngoxa yena engumqeshwa owonayo, uhlala elala naye. UChris ukhathazekile ukuba akalungele ukuba nguyise, kodwa emva kokunika uTom isiluleko esinobubele, uyavuma ukunikela ngesidoda sakhe kuAnn.
I-Airdate yasekuqaleni: ngo- Ephreli 4, 2013
Ikhansela uJamm ukhulume noRon ngokumbetha ebusweni kumtshato kaMeslie noBen, kwaye uRon unquma ukuzimela. Ufuna ukuba uTom no-Apreli baxelele inyaniso ngaye ngediphozithi, eyenza ukhangele ityala. Kodwa uEpreli noTom bafumana ubungqina obububungqina bukaJamm baze bamncede. ULeslie noBen babuyela kwidolophu yakubo yaseBen yeCartridge, eMnnesota , apho iBen isetyenziselwe ukufumana isihluthulelo esixekweni, kodwa yonke into yindlela yokusekisa uBen. UAnn noChris banenkxalabo malunga nokuhambelana kwabo njengabazali.
Isihloko: "Ulawulo lwezilwanyana"
I-Airdate yasekuqaleni: ngo- Apreli 11, 2013
ULeslie unquma ukugqithisa isebe lolawulo lwezilwanyana, eliya kuba nzima kunokuba lilindele. Utyumba u-Apreli ukuba ngumlawuli omtsha weSebe. U-Apreli ucacisa ukuba uyifake kwi-parks yesebe, kwaye ibhunga le sixeko lidlulisa isindululo. UBen uzama ukutshisa umdaka uDennis Feinstein ngokunikela kwiSweetums Foundation, kodwa uFeinstein uyaziqhenya kwaye akafuni ukunikela. URon uyagula kwaye uAnn ugxininisa ukuba aye kudokotela.
Isihloko: "Isiqendu sesibini"
I-Airdate yasekuqaleni: ngo- Ephreli 18, 2013
ULeslie uphakamisa isikhalazo sokukrazula yonke imithetho yase-dolophu yase-dolophu, kwaye ummi wendawo onenkani ( uPatton Oswalt ) uhambisa i-filibuster ukummisa. Ubeka ibhetti kunye naye ukuba nabani na abahlala njengabahlali beli dolophu yasekhaya likaPawnee elide liza kuhamba, kodwa xa ebonakalisa ngokukhawuleza, uyenza isivumelwano esitsha sokuba ahlawule i-filibuster ukuze atshintshele ubulungu uluntu lwengingqi. Umkhosi wamaKristi uAprili noRon ukuba bathathe i-seminar yokuqeqesha, kunye no-Apreli u-Ron kunye no-Chris. UBen noAnn bancintisana ukuba bathenge intsimbi ephuma kwiJJ Diner yaseLeslie.
Isihloko: "UJerry's Retirement"
Usuku lokugqibela lukaJerry ngaphambi kokuthatha umhlalaphantsi wakhe, kwaye uLeslie uzama ukumnceda afinyelele amaphupha akhe ngaphambi kokushiya iHolo yeSixeko, kunye neziphumo eziphumelelayo. UChris noAnn baziva bexhala emva kokuba bavunyelwe ukutshatyalaliswa kwabo, kwaye bahlala belele ndawonye. Abaqinisekanga kodwa bavulekele ngekamva lolwalamano lwabo lothando. UTom uzama ukuphepha ukuba abe nguJerry omtsha, i-ofisi yokuhleka, emva kokuba uJerry ehamba. Ukunceda uTom ukuba aphume, uRon uqesha uJerry emva kwexesha elide ukwenzela ukuba abuye abe yinto yokuzonwabisa yamahlaya ngelinye ilanga ngeveki.
Isihloko esithi: "U-Ving Vote"
I-Airdate yasekuqaleni: uEpreli 25, 2013
URon uphawula uhlahlo lwabiwo-mali lwe-mini-golf-golf, kwaye uLeslie uzimisele ukuwugcina. UJamm nguvoti yokuvota kwibhunga leedolophu, kwaye uthi uya kuvota ngokuphumelela kumdlali we-golf-mini phakathi kweThelie noRon. URon uyaphumelela kwaye ikhosi iyaxhaswa, kodwa u-Leslie ngokukhawuleza uza kunye nesiluleko esitsha sokuyigcina. UTom unika uAnn uncedo ekuzameni kwakhe ukuphula uM Mona Lisa, kodwa akakwazi ukubaleka. UAndy ufumanisa ukuba iqela lakhe lidlale ngaphandle kwakhe, kwaye emva kokubanqabela okokuqala, ekugqibeleni ujoyina.
Isihloko esithi: "Ngaba ulungile?"
I-Airdate yasekuqaleni: Meyi 2, 2013
U-Leslie ubambe idibano yedolophu kuyo yonke into eyenziwa ngayo, kodwa abaninzi abahlali basezidolophini bathukuthelele iindleko eziye zadlulayo, kwaye baqala ukunyakaza ukuba bamkhumbule kwiofisi. UAndy ufumana uvavanyo lokukhulelwa oluhle kwinqwelo kwaye uzama ukufumana ukuba ngubani. Emva kokupheliswa ngo-Apreli, uAnn, Leslie, uDonna no-Mona Lisa, ufumanisa ukuba intombi kaRon uDiane nguye okhulelwe. UTom ufumana umrhumo wokuthengisa iRhafu yeSagi, kwaye xa athe wala, ummeli womthengi oyimfihlakalo ubonisa ukuba umthengi wakhe uya kuvula ivenkile efana nangoko kwisitalato. U-Apreli uyamkelwa kwisikolo sezilwanyana eBloomington.
Iidlangalaleni eziLaziwayo zaseJamani - Iqendu 1: FC Bayern München kunye neC FC St. Pauli
Iingcebiso ezili-10 zokuthatha iimviwo zovavanyo
Intetho yeSaku ngesiJapan